Herin'ny nokleary, fananganana sy fanafanana, fiarovana ny rano - KAIQUAN
Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra paompy matihanina lehibe indrindra, manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana & famolavolana, famokarana & fivarotana paompy avo lenta, rafitra famatsian-drano & rafitra fanaraha-maso paompy. Mitarika indostrian'ny famokarana paompy any Sina izy io. Ny mpiasa totaliny dia mihoatra ny 5000, ahitana 80% mahery ireo manana diplaoma amin'ny oniversite, injenieran'ny 750, injeniera zokiny ary dokotera. KAIQUAN vondrona manana zaridaina indostrialy 5 any Shanghai, Zhejiang, Hebei, Liaoning ary Anhui miaraka amin'ny velarantany 7000.000 metatra toradroa.
(Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co., Ltd. no mpanamboatra matihanina indrindra amin'ny motera rendrika sy paompy herinaratra ao amin'ny governemanta nasionalin'i Sina).
Shijiazhuang Kaiquan Slurry Pump Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2005 niaraka tamin'ny fampiasam-bola mitentina 20 tapitrisa USD, mahatratra 47,000 metatra toradroa sy velarantany manodidina ny 22000 metatra toradroa ny velarany. Amin'izao fotoana izao dia manana manam-pahaizana 250, teknisiana teknisiana ambony ary mpiasa mahay izy io. Misy ny tsipika famokarana resina manerantany sy ireo mixer fasika mitohy. Ny kofehy rehetra dia mandray ny famolavolana fasika fenol ary manana lafaoro haavo antonony 2 taonina sy 1-taonina izay afaka mandrafitra firavaka tokana 8 taonina. Ho fanampin'izay dia manana andiana fitaovana mandroso 300 mahery izy.
Shenyang Kaiquan Petrochemical Pump Co., Ltd. dia sampana iray an'ny KAIQUAN Group izay manana ny velarany 34.000 metatra toradroa sy velaran'ny trano 12000 metatra toradroa. Mpiasa 630 izao no ao izay ahitana injeniera zokiolona 63. Misy milina 200 mandroso toy ny fitaovana milina NC, fitaovana milina lehibe, milina fandanjalanjana haingam-pandeha, fitaovana fanamafisam-peo mandeha ho azy tsy manimba.
Ny Zhejiang Kaiquan Industrial Park dia niorina tamin'ny volana septambra 1968 ary nantsoina hoe Zhejiang Kaiquan Pump Manufacturing Co. Ltd. tamin'ny Mey 1994. Manodidina ny 50.000 metatra toradroa ny velarany ary velaran-trano 23,678 metatra toradroa any Zhejiang. Ankehitriny dia manana mpiasa 490 sy andiana 213 fanodinana sy fitaovana fanandramana miaraka amina famokarana maherin'ny 100.000 isan-taona miaraka amin'ny sanda famokarana 35 tapitrisa USD isan-taona.
Tamin'ny 9 Mey 2018, Andriamatoa Tang yurong, Svenska kullager-fabriken vondrona lefitra filoha lefitra ary filohan'ny SKF Asia, ary Andriamatoa Wang wei, filohan'ny SKF Sina ...
Nanaiky an'izao tontolo izao i Kaiquan fa nanao fandrosoana vaovao tamin'ny tsena ampitan-dranomasina
Tamin'ny 3 jolay 2019, kaontenera 40 metatra telo no nalefa soa aman-tsara avy tao amin'ny foiben'ny vondrona kaiquan any Shanghai ho any amin'ny seranan-tsambon'i ho chi minh, Vietnam, nanamarika zava-bita lehibe iray lehibe teo amin'ny tsena ampitan-dranomasina kaiquan grou ...
Ny fifanakalozana ara-teknika dia mahatonga an'i kaiquan handroso kokoa
Vao tsy ela akory izay, nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivorian'ny rano ny tanàn-dehibe mpitrandraka rano any guangxi, fivarotana teknolojia fiarovana ny angovo teknika, nitarika ny fivoriana ny rano sy ny rano ...